Maamulka majeerteniya iyo maamulka daam-jadiid ee somaliya ayaa sas ka qaaday hubka somaliland qabatay‏
Sunday February 01, 2015 - 16:08:48 in Maqaallo by
Sida aad lawada socotaan waxa dekada magalada berbera lagu qabtay markab hub sida todobaadkii tegay, waxa hubkii iyo markiiba lagu hayaa marsada dekada berbera, , haddaba, markii taasi dhacday waxa qaylo
afka kala qaday ka baxsan akhlaaqda dadnino iyo islaamnimo maamulka majeerteniya iyo kooxda dawlada xamar ee daam.jadiid.
waxa aan aad ula yaabay caqli xumida, calool xumida, cuqdad xumida, cudur xumida reer majeerteeniya u qabaan reer somaliland ka dib markii ay si xun oo cuqdadaysan uga hadleen markaabkaasi iyagoo ku sheegay hubkaas inay leeyihiin al shaab iyagoo is leh ku xumeeya reer somaliland.
waxa reer somaliland u cadaatay cadawga qudha ee ay leeyihiin inay yihiin Majeerteeniya iyo maamulka faqashta ee tabarta daran ee DAAM-JADIID ee muqdisho.
reer majeerteeniya waxay na xasuusinyaan maansadii lagu yidhi 1980kii ee ahayd .
MASKAX YARE , MALAY XADHIG KU DABE , MURANA NAAGOODLE
MACNA YARE , MALAY XADHIG KU DABE , GABAY MAJEERTEENLE
MASALOOYINKII UU SHALAY LAHAA MAANTA GARAN WAAYE.
anna masuulka u hadlay maamulkaa majeerteeniya waxa , leeyahay HADAL MAJEERTEENLE.
Waxa cadaatay maanta in maamulka majeerteeniya iyo daam jadiidta muqdisho ay sas ka qaaeen hubkaa qaniimada ah ee berbera yimi ee alla keenka ah, waxa kaloo cadaatay in ay sida fiinta uga qayli hubkaa la qabatay.
maanata 2 febrawery waa maalintii ciidanka qaran somaliland la aasaasay, waxaan leeyahay ciidanka qaranka somalilnad hambalyo.
Dowlada somaliland iyo ciidanka qaranka waxaan ka codsanaynaa inay ku ruqaansadan xudduda somaliland oo ka dhaqaaqaan Gambadha oo tagaan GARAC LAGU DHAL(xuddudii ingiriiska iyo talyaaniga).